२३ माघ, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी विद्यानन्द माझी निलम्बनमा परेका छन् । इटहरीमा भएको बलात्कार काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोपमा एपसी माझीसँगै इन्स्पेक्टर चिरञ्जीवी दाहाल पनि निलम्वनमा परेका छन् । इटहरीमा भएको बालिका बलात्कार प्रकारणलाई लुकाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि मंगलबार उनलाई निलम्बन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । माझीसँगै प्रहरी निरीक्षक चिरञ्जीवी …
कतार एयरवेजको जहाज काठमाडौँको अकाशमा ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो!
कतारको दोहाबाट काठमाडौँ आउदै गरेको कतार एयरवेजको जहाज आज काठमाडौँको आकाशमा दुर्घटना हुनबाट बचेको छ। ६५२ नम्बरको कतार एयरवेजको जहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा सामान्य गल्तीका कारण ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ । खराब मौसमका कारण जहाजले गलत बाटोबाट अवतरण गर्न खोजेको विमानस्थलका स्रोतले बताएका छन् । साथै यस जहाजको कारण केहि समय अन्य जहाजका उडान पनि प्रभावित …
उत्तर कोरियाली जनतामाथि अमेरिकाले गरेको अत्याचार झल्काउने पेन्टिङहरु पछिल्लो समय निकै चर्चामा छन् । यी पेन्टिङले सिन्चान नरसंहारमा भएको अत्याचार झल्काउँछन् । यी हस्तनिर्मित चित्रहरुमा कोरियन युद्धका बेला अमेरिकी सैनिकले उत्तर कोरियाली जनतालाई गरेको अत्याचार देखाइएको छ । यी चित्रहरु सन् २००५ मा तयार गरिएका थिए । अहिले उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाव बढेपछि यी तस्वीरहरु पुनः चर्चामा छन् । …
आफ्नो बुढि औँलाको नङबाट यसरी पत्ता लगाउनुहोस, तपाँइ बुद्धिमान कि सामान्य ?
यदि हामी आफ्नै शारीरिक अंगका बारेमा ध्यान दियौँ भने, कहिले त आफै अचम्ममा पर्छौ । जस्तै हाम्रो छालामा हुने छिद्र, हातमा बनेको बांगो–टिंगो रेखा, जसले अंगलाई पूर्णता दिएको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको नङ फरक–फरक हुन्छ । हात वा खुट्टा दुवै नङको आकार फरक हुन्छ, त्यस्तै एउटा चीज सबैमा हुन्छ, त्यो हो नङमा बनेको अर्ध चन्द्राकार । के तपाईले कहिल्यै नङमा …
हुन त काठमाडौं उपत्यकामा धेरै शिक्षित नागरिक बस्छन् । यहाँ सभ्य र विकसित सभ्यता छ । अत्याधुनिक प्रविधि नियन्त्रित जस्तै छ काठमाडौं उपत्यकाको दैनिकी । तर पनि यो शहरको पहिचाहन बनेका जे जति परम्परा जिवित छन् ति सँगै यहाँ उति नै अन्धविश्वास जकडिएको छ । त्यसैका ज्वलन्त उदाहरण हो, काठमाडौं उपत्यकाका टिकाथलीमा रहेको भूत घर । जहाँ मान्छे बस्नु त …
के तपाईको आँखाको वरिपरी चाउरीपना देखिन थालेको छ? अपनाउनुहोस् यी अत्यन्त प्रभावकारी उपाय
बढ्दो उमेरको साथ-साथै आँखाको वरिपरी त्वचामा चाउरीपना पर्न थाल्छ र कतिपय मानिसलाई कम उमेरमै यस्तो समस्या देखिन शुरु हुन्छ । अनुहारमा कसिलोपन कम हुनु कोलोजनको कमीको कारण हुन्छ, जसको कारणले चाउरीपना पर्न थाल्छ । यदि तपाईको जीवनशैली राम्रो छैन या आहार पौष्टिक छैन भने यो समस्या आउन सक्छ । तर यस्ता कयौँ घरेलू उपाय छन्, जसको मद्दतले आँखाको वरिपरीको चाउरीपना …
वैज्ञानिहरुले संसारमा भएका धेरै जिवजन्तु र प्राकृतिक कुराहरूकाे अध्ययन गरेर सफलता हात पारीसकेका छन । पछिल्लाे समयमा बैज्ञानिकहरू एउटा यस्ताे जीवकाे अध्ययन गरीरहेका छन जसले सजिलै सित पुर्नजन्म लिन सक्छ । मैक्सिकन एक्सोलॉटल नामक यो प्राणी मेक्सिकोको झाडीमा पाइन्छ। जुन बिना पानी पनि बाँच्न सक्छ। साधुरणतया छेपाराे जस्ताे देखिने याे जिवले अाफनाे अङगहरू नष्ट हुदै गएपछि विस्तारै सजिलैसंग नयाँ अङगहरू …
सैफ सुटिङका लागि घर बाहिर गएका बेला एक्लै हुँदा रुन्छिन् करीना !
बलिउड नायिका करीना कपूर हिजो आज पति एकान्तमा एक्लै रुने गर्दछिन् । यो कुराको खुलासा करिना आफैले गरेकी हुन् । केही दिन अघि पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले पति सैफ सुटिङका लागि घर बाहिर गएका बेला सैफअलि खानलाई सम्झदै आफूले आँसु थाम्न नसक्ने गरेको बताएकी हुन् । उनले भनिन, ‘सैफ जब सुटिङका लागि घर निस्कन्छ, म उसलाई मिस गर्छु र एक्लै रोएर …
शिल्की , चिल्लो र नरम कपालको सपना हरेक केटीको हुन्छ । कपाल जस्तोसुकै किसिमको भएपनि सिल्की र चम्किलो भएमा आर्कषक देखिन्छ । पोषणको कमी , कपालको हेरविचार नगर्नु , विभिन्न रसायनहरु प्रयोग गरिएको उत्पादनहरुको प्रयोग आदिले गर्दा पनि कपाल बिग्रिने हुन्छ । तपाईंले निम्न घरेलु उपायहरु अपनाई आफ्नो कपाललाई स्वस्थ र चम्किलो बनाउन सक्नुहुन्छ । १) तातो तेलले मालिश गर्नु …
अघिल्लो दिन आकाशमा ठूलो आगोको गोला देखियो । त्यसको भोलिपल्टै गाउँमा तीनवटा विचित्रका चीज जमिनमा खसे । यस्तो दृश्य देख्दा पेरुको एक गाउँमा त्रास फैलिएको छ । पेरुको अंडियन राज्यमा भएको यो घटनाछि अनेकौं चर्चा चलिरहेका छन् । यी तीन चीजहरु अन्तरिक्षबाट खसेको दावी गरिएको छ । ती तीन गोला खस्नुभन्दा अघिल्लो रात गाउँलेहरुले आकाशमा झण्डै १८५ किलोमिटर टाढा आगोको …
महाशिवरात्रि फाल्गुन महिनाको कृष्ण चतुर्दशीमा हुने गर्दछ । भगवान शिवको पूजा-आराधना गर्नको लागी प्रत्येक महिना कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि) मा व्रत राखिने गरिन्छ तर सबैभन्दा ठुलो शिवरात्रि महाशिवरात्रिलाई मानिन्छ । १. गरुड पुराणको अनुसार शिवरात्रि भन्दा एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथिमा शिवजीको पूजा गर्नु पर्दछ र व्रतको संकल्प लिनु पर्दछ । यसको उपरान्त चतुर्दशी तिथिमा निराहार रहनु पर्दछ …
१- वास्तु शास्त्र भन्छ घरमा नुनको प्रयोगले नकारात्मक उर्जा नष्ट हुन्छ । परिवारको कुनै सदस्यलाई कसैको नजर लागेमा एक चिम्टी नुन त्यस्तो ब्यक्तिको शिरमाथि घुमाएर पानीमा बगाइदिएमा यस्तो दोष मेटिन्छ । यो मानिसहरुको स्वागतका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । २- वास्तु दोष हटाउनका लागि काँचको कचौरामा नुन राखेर शौचालय वा वाथरुममा राख्दा घरमा सकारात्मक उर्जा जम्मा हुन सक्छ । …
पैसाको लागि भोजपुरी फिल्म खेलेको हैन, नेपालको कलाकार भनेर चिन्न चाहन्छु : विराज भट्ट (भिडियो)
नायक बिराज भट्टले आफु नेपाली फिल्मबाट पलायन नभएको बताएका छन् । उनले फेसबुक मार्फत भनेका छन ‘म नेपाली फिल्म बाट हराएको छैन ।’ कुनै बेला नेपाली फिल्ममा जमेका नायक विराज पछिल्लाे समयमा नेपाली फिल्ममा खासै देखिदैनन् कारण के हो त ? उनले लेखेका छन ‘म पलायन भएको होइन पलायन हुने कलाकार अमेरिका,क्यानडा जान्छ । भोजपुरी फिल्ममा मेरो धेरै डिमाण्ड भएकाले …
झापामा भेटिए यस्ता बालक, जस्ले नेपालका चर्चित गायकहरुलाई टक्कर दिए भिडियो सहित
झापा बेलडांगी २ का यि ८ बर्षिय बालक एक्कासी भाईरल बने । राष्ट्रिय कलाकारलाई नै टक्कर दिँदै १० रुपैंया लिएर यस्तो कला देखाए भिडियो सहित …झापा बेलडांगी २ का यि ८ बर्षिय बालक एक्कासी भाईरल बने । राष्ट्रिय कलाकारलाई नै टक्कर दिँदै १० रुपैंया लिएर यस्तो कला देखाए भिडियो सहित….झापा बेलडांगी २ का यि ८ बर्षिय बालक एक्कासी भाईरल बने …